China Grooved aka abụọ-ịbịaru n'akụkụ àkwà siri ike osisi n'akụkụ kabinet # 0121 rụpụta na Factory | Yamazonhome
Grooved aka abụọ-na-eru n'akụkụ àkwà osisi siri ike n'akụkụ kabinet # 0121
Nọmba nlereanya: Amac-0121
Nha: 450mm * 400 * 470mm
Otu narị afọ osisi omenala TV kabinet
A na-ahọrọ oak ọcha si North America. Ngwongwo ndị e ji mee ya na-eguzogide mmetụta, esemokwu, ire ere, dị mfe nkụ, enweghị nkwarụ, dị mfe iwu, ma dịkwa mfe ịrapagide. Mbelata mbelata dị obere, nke mere na enwere ike iji ya na ọnọdụ ihu igwe na-agbanwe agbanwe na-enweghị nsị na nsogbu ndị ọzọ. Ọ bụ ezigbo arịa ụlọ.
Gburugburu chamfer imewe
Isi nkuku nke kabinet ahụ dị okirikiri ma dịkwa mma, ma na-echekwa nchekwa gị na ezinụlọ gị site na ụzọ aghụghọ. A na-eji aka na-ete mmanụ na-esi na mmanụ na-eme ihe, nke dị mma na gburugburu ebe obibi, na-enweghị isi pụrụ iche. Agba dị translucent na plump, na-emetụ emetụ n'ahụ, ọ naghị emetụta ịma mma nke ahịhịa osisi nke osisi. A maara ya dị ka "ngwakọta ọlaedo" nke arịa ụlọ osisi siri ike.
Ugboro abụọ drawer n'akụkụ tebụl na grooved ahụ
Ejiri imewe ahụ na drawer abụọ ma enweghị ebe nchekwa. Okwesiri maka ndi enyi ndi choro ikwanye ihe n'ime kabinet ka ha wee di ocha. Mepụta a ohere nchekwa onwe gị kwesịrị ekwesị. Tụnyere ndị kpughere ahụ, na grooved ahụ nwere ike n'ụzọ dị irè igbochi ọkọ na sere mfe. Ọ bụghị naanị na ị na-emesi ọdịdị dị mfe na nke ejiji, mana ọ naghị atụ egwu nchekwa gị.
Dovetail Tenon Fusion Solid Osisi Slide
Drawer mortise na usoro tenon jikọtara ya na okporo osisi slide osisi siri ike, usoro Luban ọdịnala, ogologo oge a ga-eji ya, ihe siri ike ma dịkwa nro. Kwalite ndọtị drawer jikọtara ọnụ na dovetail, nke mere na drọwa nwere ikike iburu ibu siri ike ma enweghị nsogbu ọ bụla. A na-eme ka okpokoro akwa n'akụkụ ya nke ọma, na-enweghị ihe mgbochi, ma nwee ederede dị nro ma dịkwa mma. Gaghị echegbu onwe gị maka ịkọ ọkọ mgbe ị tinyere uwe gị.
Otu okpukpu osisi gbara ọkpụrụkpụ nwere ụkwụ siri ike karị
Legskwụ osisi siri ike, ime ụlọ kwụ ọtọ, usoro mmụta sayensị na-arụ ọrụ na njikọta siri ike na desktọọpụ, 18cm dị n'elu ala nwere oghere dị ọcha. Mmetụta dị nro na ala nke ụkwụ adịghị amị amị ma na-eguzogide ọgwụ, na imepụta humanized enweghị ike ịchekwa ala site na ọkọ, kamakwa mgbagha nke esemokwu ụkwụ. Uzo eji eme otu osisi na-eme ka ibu na-adi ike.
Nke gara aga: China Factory 8M 10M Yi Customize Air Trick Pool ise n'elu Inflatable Yoga ute 0395
Osote: Obere ụlọ na-adọkpụ ụlọ ndozi abalị n'akụkụ ụlọ # 0122
Simple single drawer ime nightstand side ca ...
Light okomoko marble iri table mfe combina ...
Osisi siri ike Sisal Cat Scratch Board 0237
Otu Door Anọ Drawer Side Cabinet Simple Sofa S ...
High-ọkwa Dog ulo nkita Solid Wood ụba Pet Bed ...